Tsipika famokarana zezika organika 50 000 taonina - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Mba hampivelarana ny fambolena maintso dia tsy maintsy hamahana ny olan'ny fahalotoan'ny tany aloha isika. Ny olana mahazatra amin'ny tany dia ny: fanginana ny tany, tsy fifandanjana ny tahan'ny sakafo mahavelona, ​​ambany ny votoatin'ny zavatra biolojika, ny fambolena ambany, ny fanamorana ny tany, ny fanamasinana ny tany, ny fandotoana ny tany, sns. mila hatsaraina ny tany. Hatsarao ny votoatin'ny zavatra biolojika ao anaty tany, mba hisy be kokoa ny pilina sy ny singa manimba ao amin'ny tany.
Manome ny famolavolana sy fanamboarana andalana famokarana zezika voajanahary izahay. Ny zezika biolojika dia azo amboarina amin'ny residana metana, fako fambolena, zezika sy zezika akoho amam-borona ary fako monisipaly. Ireo fako biolojika ireo dia mila karakaraina bebe kokoa alohan'ny hamadihana azy ireo ho zezika biolojika ara-barotra lafo amidy. Ny fampiasam-bola amin'ny famadihana ny fako ho harena dia mendrika tokoa.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika vaovao misy vokatra 50 000 taonina isan-taona dia be mpampiasa amin'ny famokarana zezika biolojika misy fako fambolena, fiompiana ary zezika akoho, maloto ary fako an-tanàn-dehibe ho akora voajanahary. Ny tsipika famokarana iray manontolo dia tsy vitan'ny fanovana ny fako biolojika samihafa ho zezika organika, fa hitondra tombony ara-toekarena sy tontolo iainana lehibe koa.
Fitaovana famokarana zezika biolojika dia misy hopper sy feeder, granulator drum, fanamainana, milina sieve roller, bucket hoist, conveyor fehikibo, milina fonosana ary fitaovana fanampiny fanampiny.
Akora efa be mpampiasa
Ny tsipika famokarana zezika vaovao dia azo ampiharina amin'ny zavatra biolojika isan-karazany, indrindra ny mololo, sisa tavela amin'ny alikaola, sisa tavela amin'ny bakteria, solika sisa tavela, zezika sy zezika akoho amam-borona ary fitaovana hafa izay tsy mora ambolena. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana asidra humika sy fotaka maloto koa izy io.
Ity manaraka ity dia ny fanasokajiana ny akora amin'ny tsipika famokarana zezika organika:
1. Fako fambolena: mololo, sisa tavela amin'ny tsaramaso, poti-landihazo, vovo-bary sns.
2. Zezika biby: fifangaroan'ny zezika akoho sy zezika biby, toy ny trano famonoana omby, fako avy eny an-tsena, trondro, kisoa, ondry, akoho, gisa, ovy osy sy kotsa.
3. Fako indostrialy: ambin'ny alikaola, sisa tavela amin'ny vinaingitra, sisa tavela amin'ny mangahazo, sisa tavela amin'ny siramamy, sisa tavela amin'ny fatrohana, sns.
4. Fako ao an-trano: fako sakafo, faka sy ravina legioma sns.
5. Sludge: fotaka avy amin'ny renirano, tatatra, sns.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika dia misy dumper, mixeur, crusher, granulator, fanamainana, cooler, milina fonosana sns.
Ny tsipika famokarana zezika biolojika vaovao dia manana ny mampiavaka ny fahombiazany, ny fahombiazany, ny fikojakojana mety ary ny androm-piainana maharitra.
1. Ity karazany ity dia tsy mety amin'ny zezika biolojika ihany fa koa amin'ny zezika biolojika biolojika izay manampy bakteria miasa.
2. Ny savaivon'ny zezika dia azo ahitsy arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Ny karazan-javamaniry zezika rehetra novokarina tao amin'ny ozinay dia misy: granulator zezika voajanahary vaovao, grenatera kapila, granulator bobongolo fisaka, grenady amponga sns. Misafidiana granatera samihafa hamokarana sombina amin'ny endriny samihafa.
3. Ampiasaina be. Izy io dia afaka mitsabo akora isan-karazany, toy ny fako biby, fako fambolena, fako misy fermentation, sns. Ireo akora biolojika rehetra ireo dia azo zahana ho andiana zezika biolojika ara-barotra.
4. automatisation avo lenta ary avo lenta. Ny rafitry ny fangaro sy ny milina famonosana dia fehezin'ny solosaina sy mandeha ho azy.
5. Kalitao avo lenta, fampisehoana marin-toerana, fandidiana mety, diplaoma automatique avo lenta ary fiainana maharitra. Raisinay ny kaonty feno momba ny zavatra niainan'ny mpampiasa rehefa namolavola sy nanamboatra milina zezika izy ireo.
Serivisy ampiana lanja:
1. Ny orinasanay dia afaka manampy amin'ny famolavolana drafitra fototra tena izy aorian'ny fanamafisana ny baikon'ny mpanjifa.
2. Manaraka tanteraka ny fenitra teknika mifandraika amin'izany ny orinasa.
3. Fitsapana mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'ny fitsapana fitaovana.
4. Fanaraha-maso henjana alohan'ny handaozan'ny vokatra ny orinasa.
Ny biby fiompy voajanahary sy ny akoho amam-borona ary ny akora hafa dia ampidirina mivantana ao amin'ny faritra misy ny fermentation. Rehefa vita ny fermentation iray sy ny fahanterana faharoa ary ny fametahana dia nesorina ny fofon'ny zezika sy ny akoho amam-borona. Ny bakteria fermenta dia azo ampiana amin'ity dingana ity mba hamoahana ireo kofehy maditra ao anatiny mba hahafahan'ny fatra haben'ny poti-javatra fanorotoroana mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famokarana granulation. Ny mari-pana amin'ny akora dia tokony fehezina mafy mandritra ny fanamasinana mba hisorohana ny maripana be loatra ary hanakanana ny asan'ny zavamiaina bitika sy ny anzima. Ny milina mihetsiketsika mandeha sy ny milina fitifirana hydraulic dia be mpampiasa amin'ny flip, fampifangaroana ary ny fanafainganana ny stack.
2. Crusher zezika
Ny fizotran-javatra fanosehana vita amin'ny fermenta izay mameno ny fizotran'ny fahanterana sy ny fametahana faharoa dia azon'ny mpanjifa ampiasaina mba hisafidianana crusher material semi-wet, izay mifanaraka amin'ny hamandoan'ny akora akora amin'ny faritra maro.
Aorian'ny fanorotoroana ny akora, manampia otrikaina hafa na akora fanampiny manampy arakaraka ny raikipohy, ary ampiasao mixeur marindrano na mitsangana mandritra ny fizotran-javatra mba hampikorontana ny akora sy ny additive.
Alohan'ny fanangonam-bolo, raha mihoatra ny 25% ny hamandoan'ny akora, miaraka amin'ny hamandoana sy ny haben'ny sombin-javatra, dia tokony ho latsaky ny 25% ny rano raha ampiasaina amin'ny fanamainana ny fanamainana amponga.
Masinina granule zezika biolojika vaovao no ampiasaina hanangonam-bokatra ny akora ho lasa baolina mba hitazomana ny asa mikraoba. Ny tahan'ny fahaveloman'ny zavamiaina bitika mampiasa an'ity granulator ity dia mihoatra ny 90%.
Ny habetsahan'ny hamandoan'ny sombintsombin'ny granulation dia manodidina ny 15% ka hatramin'ny 20%, izay mihoatra ny tanjona kendrena. Mila milina fanamainana mba hanamorana ny fitaterana sy ny fitehirizana ny zezika.
Ny vokatra maina dia miditra amin'ny cooler amin'ny alàlan'ny conveyor fehikibo. Ny cooler dia mandray ny vokatra hafanana mangatsiaka amin'ny rivotra mba hanafoanana tanteraka ny hafanana sisa tavela, ary hampihena bebe kokoa ny votoatin'ny sombintsombiny.
Manome milina sieving amponga avo lenta sy avo lenta izahay mba hahatratrarana ny fanasokajiana ireo akora namboarina sy ny vokatra vita. Ny fitaovana voaverina dia averina amin'ny crusher mba hikarakarana bebe kokoa, ary ny vokatra vita dia atolotra amin'ny milina famonoana zezika na mivantana amin'ny milina famonosana mandeha ho azy.
Ny vokatra vita dia miditra amin'ny milina famonosana amin'ny alàlan'ny conveyor fehikibo. Mitondrà fonosana vita vita amin'ny isa sy mandeha ho azy. Ny masinina fonosana dia manana halavirana be dia be ary marina tsara. Izy io dia atambatra amin'ny milina fanjairana mpampita amin'ny countertop azo nakarina. Masinina iray no miovaova sy mahomby. Hihaona amin'ny takiana famonosana sy fampiasana tontolo iainana ho an'ny entana samihafa.